Canada Zvino Yadzima Kuenda Kunyika dzeSouth Africa Nekuda kweOmicron
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Canada Zvino Yadzima Kuenda Kunyika dzeSouth Africa Nekuda kweOmicron
Kubva pakatanga denda, Hurumende yeCanada yakaisa matanho pamuganhu wedu kudzikisa njodzi yekupinza uye kutapurirana kweCCIDID-19 uye akasiyana ayo muCanada ane chekuita nekufamba kwenyika. Nhasi, Gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu, Vanoremekedzwa Omar Alghabra uye Gurukota rezvehutano, Honourable Jean-Yves Duclos, vazivisa matanho matsva emuganho kuchengetedza hutano nekuchengetedzeka kwevaCanada.
Senzira yekudzivirira, kusvika Ndira 31, 2022, Hurumende yeCanada iri kuita matanho emuganho akawedzerwa kune vese vafambi vanga vari mudunhu reSouthern Africa - kusanganisira South Africa, Eswatini, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, neNamibia - mukati mazuva gumi nemana apfuura ndisati ndasvika muCanada.
Zvizvarwa zvekunze zvakafamba mune ipi yenyika idzi mukati memazuva gumi nemana apfuura havazobvumidzwa kupinda muCanada.
Vagari vekuCanada, vagari vekusingaperi uye vanhu vane chinzvimbo pasi pemutemo weIndia, zvisinei nemamiriro avo ekudzivirira kana kuve nenhoroondo yapfuura yekuongororwa kuti vane CCIDID-19, vanga vari munyika idzi mumazuva gumi nemana apfuura vachange vachiedzwa. , kuongorora, uye matanho ekuvharirwa.
Vanhu ava vanozodiwa kuti vatore, mukati memaawa makumi manomwe nemaviri ekubva, bvunzo isina kunaka yeCCIDID-72 yemamorekuru munyika yechitatu vasati vaenderera mberi nerwendo rwavo kuenda kuCanada. Kana vasvika kuCanada, zvisinei nemamiriro avo ekudzivirira kana kuve nenhoroondo yapfuura yekuongororwa kuti vane CCID-19, vanozoongororwa nekusvika ipapo. Vese vafambi vanozodikanwawo kuti vapedze bvunzo pazuva rechisere mushure mekusvika uye kuvharirwa kwemazuva gumi nemana.
Vese vafambi vanozoendeswa kuvakuru vePublic Health Agency yeCanada (PHAC) kuti vaone kuti vane chirongwa chakakodzera chekuvharirwa. Avo vanosvika nemhepo vanozodikanwa kuti vagare munzvimbo yakatarwa yekuvharirwa ivo vakamirira mhedzisiro yavo yekusvika. Ivo havazotenderwe kuenderera mberi nekufamba kudzamara hurongwa hwavo hwekuvharirwa hwatenderwa uye vawana mhedzisiro yekusvika isina kunaka.
Avo vanosvika nepamunda vanogona kubvumidzwa kuenda vakananga kunzvimbo yavo yega yakafanira. Kana vasina hurongwa hwakakodzera - kwavasingazoonana nemunhu wavasina kumbofamba naye - kana vasina chekufambisa kuenda kunzvimbo yavo yekugara, vanozonzi vagare panzvimbo yakatarwa.
Pachave nekuwedzera kuongororwa kwezvirongwa zvekuvharirwa kwevafambi vanobva munyika idzi uye kutarisisa kwakasimba kuona kuti vafambi vari kutevedzera matanho ekuvharirwa. Kupfuurirazve, vafambi, zvisinei nemamiriro avo ekudzivirira kana kuve nenhoroondo yapfuura yekuongororwa kuti vane CCIDID-19, vakapinda muCanada vachibva kunyika idzi mumazuva gumi nemana apfuura vachabatwa uye kutungamirwa kuti vaongororwe uye kuti vagare vega ivo vakamirira. mhinduro dzebvunzo idzodzo. Hapana kuregererwa kunopiwa zvakananga mune izvi zvitsva zvinodiwa.
Hurumende yeCanada inopa zano vanhu vekuCanada kuti vadzivise kuenda kunyika dziri mudunhu rino uye vacharamba vachitarisa mamiriro ezvinhu kuti vazivise zvazvino kana zvichauya.
Canada inoenderera mberi nekuchengetedza pre-yekupinda mamorekuru kuyedzwa kwevavhairi uye vasina kuvharirwa vafambi vekunze vanosvika kubva chero nyika kudzikisa njodzi yekupinzwa kunze kweCCIDID-19 kusanganisira akasiyana. PHAC yanga ichitarisawo data yekesi, kuburikidza nekuyedzwa zvisina kujairika pakuyedzwa pakupinda muCanada.
Hurumende yeCanada icharamba ichiongorora mamiriro ezvinhu uye kugadzirisa nhanho dzemuganho sezvinodiwa. Nepo kukanganisa kwese kwakasiyana kuchiri kutariswa muCanada, vaccination, musanganiswa nehutano hweveruzhinji nematanho emunhu, iri kushanda kudzikisa kupararira kweCCIDID-19 nemisiyano yayo.